Kwinqwelo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Sebenzisa amandla akho enkululeko kunye nokuguquguquka ukwalathisa ikamva lakho.
Intsingiselo yeKhadi leTarot «Inqwelo yokulwa»
La Ikhadi leTarot Inqwelo yokulwa ibonisa iimvakalelo zoloyiso zenkululeko, ngokungathi inqwelo yayihamba ezitratweni njengegorha (okanye iqhawekazi). Eli khadi libonisa ukuvuyisana ngempumelelo enkulu kwaye lisebenza njengophawu lokuxhotyiswa.
Amavili amakhulu kunye namahashe adlalayo ayakhawuleza ngokukhawuleza kangangoko unokufumana amandla yomyolelo womqhubi. Olu hlobo lwempahla lwenza ukuba uninzi lwehlabathi lufikeleleke kwibhongo elinye thabatha iintso zeNqwelo yokulwa. Kodwa kukho ingozi kule mvakalelo yenkululeko, ngenxa yokunyuka kwezinga lokutshintshiselana kunye namandla alo okukhulisa iimpazamo kwisigwebo. Njengomlwi onamava, inqwelo iyabizwa ukuba ijonge ngakumbi kwindlela eya phambili.
Jonga iintshukumo zotshintsho zizele zizithembiso kunye nokuzonwabisa.
Inqwelo icebisa ukuba kufuneka uzilungiselele utshintsho ezinokubandakanya intshukumo okanye ithuba lokuhamba. ICharioteer ihamba ukukhanya kwaye ihlala ivulekile kumava amatsha atshintsha ngentlambo nganye okanye ipaseji yentaba.
Unokucelwa ukuba uhlale nesutikheyisi kwaye ujonge indawo nganye kwikhaya lakho okwexeshana. Yamkela abantu abatsha abeza ebomini bakho. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, yanda ngakumbi kwaye ukonwabele ukonwaba kwenkululeko. Inqwelo ayinanto ukuba ayonelanga.
Zilungiselele kwaye uziqulathe ngokwakho kwiinguqu eziza kukuhambisa kwaye zikuthathe nazo.